Tamin&#39;ny alàlan&#39;ny angon-drakitra fandaniam-bola nomen&#39;ny orinasa any an-tsekoly sy sekoly sekoly charter, ny Departemantan&#39;ny Fanabeazana Indiana dia manolotra ireo sary ireo mba hampiroborobo ny fangaraharana ara-bola sy hanohanana ny fampitahana ny fandaniam-bola manerana ny tranon&#39;ny sekoly Indiana. Ireo angon-drakitra ireo dia mitaky ny fepetra takian&#39;ny federasiona isaky ny mpianatra sy ny fepetra omen&#39;ny Indiana Code 20-42.5-3-7. (Loharanom-baovao: FY 2019)
Ohatrinona ny isam-bola natokana ho an&#39;ny mpianatra amin&#39;ny taom-bola 2019?
Ny fandaniam-bola isan-taona dia taratry ny fandaniam-panjakana sy eo an-toerana ary federaly izay notaterina tany amin&#39;ny Office of School Finance tamin&#39;ny orinasam-pianarana Indiana sy sekoly charter. Ny fandaniam-bola tanteraka ny 1 Jolay ka hatramin&#39;ny 30 jona dia mizara ny isan&#39;ireo mpianatra voasoratra tao amin&#39;ny sekoly ny 1 Oktobra.
Inona ny fandaniam-bola tanteraka ho an&#39;ny fanjakana?
Ny fandaniam-bola tanteraka dia misy ny fandaniam-bola sy fandidiana. Ireo fandaniam-bola ireo dia taratry ny fandaniam-panjakana sy eo an-toerana ary federaly mifandraika amin&#39;ny fandaharam-pianarana any Indiana.
Ny tahan&#39;ny fandaniam-bola ampiasaina amin&#39;ny tanjona fampianarana amin&#39;ny sekoly iray.
Ny tahan&#39;ny fandaniam-bola ampiasaina amin&#39;ny tanjona fampianarana nozarina manerana ny sekoly.
Ny fitomboan&#39;ny fandaniam-bola ho an&#39;ny tanjon&#39;ny fampianarana dia tsy tafiditra ao amin&#39;ny sokajy fampianarana hafa.
Ny tahan&#39;ny fandaniam-bola ho an&#39;ny fitaterana, fikojakojana, serivisy ara-bola ary birao foibe.
Ny tahan&#39;ny fandaniam-bola ampiasaina amin&#39;ny tanjona miasa manerana ny sekoly.
Inona no fandaniam-bola voailika ho an&#39;ny fanjakana?
Ny fandaniam-bola tsy voaaro dia mitaky fandaniana tsy arak&#39;asa sy fampandehanana ary tsy tafiditra ao anatin&#39;ny fandaniam-bola sy kajy ny fandaniana isan-taona / mpianatra.
Harara-bidiny: Serivisy amin&#39;ny sakafo
Ny salanisan&#39;ny fandaniam-bola voailika ampiasaina amin&#39;ny fanomezana serivisy sakafo ho an&#39;ny mpiasa sy ny mpianatra.
Harara-lany: Ny hafa
Ny serivisy tsy misy sakafo dia anisany. Tafiditra ao ny fandaniam-trosa, ny fanofa trano, fanabeazana amin&#39;ny olon-dehibe, ny fanomezana ho an&#39;ny fananganana, ny vatsim-pianarana, ny serivisy, ny serivisy ary ny fitaovana fananganana sy trano.
Inona avy ireo loharanon&#39;ny fandaniam-bola ho an&#39;ny fanjakana?
Vola ho an&#39;ny fanjakana / eo an-toerana
Jereo ny tatitra momba ny fandaniana ara-bola isaky ny mpianatra (ESSA). https://www.doe.in.gov/finance/school-financial-reports